Guddoomiyaha Bangiga Horumarinta Afrika oo ka hadlay Soomaaliya - BBC News Somali
Guddoomiyaha Bangiga Horumarinta Afrika oo ka hadlay Soomaaliya
Image caption Donald Kaberuka, Guddoomiyaha Bangiga Horumarinta Afrika
Guddoomiyaha bangiga horumarinta Africa, Donaldn Kaberuka, wuxuu ku baaqay baahida loo qabo xal waara in loo helo aabaraha iyo macaluusha ku soo noqnoqnaya gobolka,wuxuuna yiri tani waa in ay noqotaa abaarta u dambeysa ee dhumucdan oo kale leh.
Donaldn Kaberuka wuxuu leeyahay walaw ay iminka tahay in degd eg loogu hawl galo sidii dad loo badbaadin lahaa,haddana waxaa khasab ah in la qado lana helo xal mudada dheer wax lagaga qabto dhibaatooyinka cunno yarida, oo wax lagaga qaban karo taageero dhaqale oo toos loo siiyo qaybaha xasiloon ee Soomaaliya iyo in la dejiyo qorshe lagu dhiirigaliyo ganacsiga cunnada ee gobolka si sicirku u jabo iyo in la xaqiijiyo helitaanka hab wanaagsan oo kaydka biyaha ah si xooluhu ugu baxsadaan xilliyada jiialalka.
Mr Donald kaberuka oo ahaan jiray wasiirka maaliyadda ee Rwanda oo iminka markii 2aad noqday guddoomiyaha bank horumarinta africa wuxuu sheegay inuu urur goboleedka IGAD kala hadlay baahida loo qabo in lala yimaado qorshe xal oo waqtiga dheer ah.
"Waanu ku wada guuleysadareysanay joojinta dagaalka sokeeye ee Soomaaliya" ayy yiri Kabruka oo booqasho ku marayey washington.
Wuxuuna sheegay in aysan shaqeyneyn oo aanay suuragaleyn wada hadal lala galo kooxda Shabaab oo xukunka qaybaha abaartu ka jirto ee Soomaaliya, hase aahatee buu yiri loo baahan yahay in la sii xoojiyo ciidamada AMISOM oo dalalka africa iyo beesha caalamka looga baahan yahay taagero saad iyo sahayba ah oo lagu xasiliyo Soomaaliya.
Sida UN sheegtay 3.7 million Soomaali ah ayaa ku gaajoonaya Koonfurta Soomaaliya. inta badan gobolada abartu ka jirto waxaa maamula xarakada Shabaab oo ku dooda in cunnada gar gaarka ah ay abuureysao dadku in aysan wax kale isku halayn.
Waxaana shababku ku eedeyey Qaramada Midoobay in ay ka badbadineyso baaxadda abaarta iyo inay siyaasadeyneyso.